အိမ်ခြံမြေ၊ ကား ဈေးကွက်ကြောင့် ရွှေအရောင်းကျ | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| November 30, 2011 | Hits:432
| | အိမ်ခြံမြေနှင့် ကားဈေးကွက် အပြောင်းအလဲ ကြီးမားမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရွှေဝယ်သူ အလွန် နည်းပါးပြီး ပြန်လည် ရောင်းချသူ များပြားနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> joker November 30, 2011 - 1:13 pm	အိမ်လေးရေ….
Reply	Rosey February 23, 2012 - 10:20 am	Hote pa shin
Reply	ကျော်ခိုင် November 30, 2011 - 10:14 pm	ခုနစ်သိန်းကျော်လား ရွှေဈေးကျတာ ဘယ်လောက်များ ထပ်တက်ချင်သေးလို့လည်း မသိဘူး လောဘသားကောင်တွေ နောက်ဘ၀ရှိတယ် ဆိုတာကို လည်း သတိရကြပါအုံးကွာ ကျရင်နည်း နည်း တက်ရင်များများ ပြိတ်တာတွေ ဖြစ်မယ့်ကောင်တွေ
Reply	UHH December 1, 2011 - 8:06 am	Un reasonable High land price can drag to lower the economy .
Reply	win.nay033 December 2, 2011 - 9:01 pm	လောဘသာတွေအိမ်တလုံသိန်တရာဝယ်ငါးရာမရရင်မရောင်ဘူ၊မသမာတဲနည်နဲပိုက်ဆံပေါးတဲ့ ။ကောင်တွေကလိုက်ဝယ်သာမန်လူတွေတောထဲ ရေက်ကုန်ပြီ
Reply	win.nay033 December 2, 2011 - 8:55 pm	၀ိသမလောဘသမားတွေများနေတာကိုဘာဈေးနှန်းမှမကြဘူ
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ရန်ကုန်တွင် အခွင့်မရှိ အမှိုက်မကောက်ရ
ကာတွန်းရုပ်ပြ ဈေးကွက် ဘာကြောင့် ပျက်ရတာလဲ